Archives des Mpangalatra - Midi Madagasikara
Sambava : Mpangalatra moto sy “autoradio”, voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 6 mars 2014 Mpangalatra, Sambava, voasambotra
Lasibatry ny mpangalatra ny moto entina miangona sy ny entana tsara tarehy ao anatin’ny fiaran’ireo mpiangona. Talohan’izao nahatratrarana azy ireo izao dia samy efa voarohirohy sy voasambotry ny polisy eto Sambava amin’izao heloka izao avokoa na ilay tovolahy mpangalatra moto na ilay zaza kely 11taona mpangalatra “autoradio” anaty fiaran’olona. Efa nigadra noho ny halatra toy…
Betafo : Mpangalatra solika roa lahy saron’ny polisy
Redaction Midi Madagasikara 8 janvier 2014 Betafo, Mpangalatra, saron’ny polisy, solika
Noraisim-potsiny izy roa lahy mpangalatra solika tao Betafo ny faramparan’ny taona lasa teo. Ela nitoratorahana hoy ny filaza raha izy roa lahy ireto. Fantatra mantsy fa efa fanaony ny mangalatra solika amin’ireny fiara lehibe miantsona eny amin’ny sisin-dalana ireny, na ihany koa amin’ireo fiara lehibe tra-pahavoazana ka tsy afa mihetsika. Ataon’ireto jiolahim-boto kely ireto jifa…